San Htun's Diary: ထူးဆန်းသော တံခါးခေါက်သံ ...
၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာလလယ် နယူးယောက်အလုပ် အော်ဖာကိုလက်ခံပြီး ၂ ပတ်အတွင်း နယူးယောက်ကိုပြောင်းတော့ အသိအစ်မက ကွင်းဖက်မှာ အိမ်ခန်းရှာပေးထားတယ်။ အိမ်ရှင်တွေက သဘောကောင်းပေမဲ့ အိမ်ရှင်သမီး ဆယ်ကျော်သက်မလေးက ညဥ့်နက်သန်းခေါင်အထိ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်တော့ အိပ်လို့ မရ။ မြို့ အသစ်၊ အိမ်အသစ်၊ လူအသစ်၊ အလုပ်အသစ်ဆိုတော့ တအားပင်ပန်းတယ်။ အိပ်ရေးမဝတော့ ခေါင်းကိုက်တယ် ခေါင်းကိုက်တော့ အလုပ်ထဲမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်။ ၂ လနဲ့ဂျပန်အိမ်ကိုပြောင်း ဂျပန်အိမ်မှာ ၂ နှစ်ကျော်နေခဲ့တယ်။ ကျန်းမာရေးတအားဆိုးလာတော့ မြန်မာအိမ်ကိုထပ်ပြောင်း အဲ့ဒီအိမ်မှာ ၄ လနေခဲ့တယ်။ အိမ်ရှင်လင်မယား၊ သမီး ၂ ယောက်ကတခန်း၊ ကိုယ်ကတခန်း။ ကျန်တာအဆင်ပြေပေမဲ့ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ အဆင်မပြေတော့ ကျန်းမာလာရင် ပြောင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားတာ မကြီးရောက်လာတော့ အိမ်ရှင်က ပိုက်ဆံ ၃၀၀ ထပ်ပေးရင် မကြီး ကိုယ့်အခန်းထဲမှာ ဆက်နေလို့ ရတယ်လို့ ပြောပေမဲ့ ကိုယ်က ပြောင်းချင်နေတာဆိုတော့ အေးဂျင့်နဲ့ ချိတ်ပြီး အိမ်ခန်းတွေလိုက်ကြည့်တယ်။ ကွင်းဖက်မှာ အာရှသားများတော့ တယောက်အိပ်ခန်းကို ၁၃၀၀ ကနေ ၁၅၀၀ ကြား၊ ၂ ယောက်အိပ်ခန်းဆို ၁၆၀၀ - ၁၈၀၀ ကြားရှိတယ်။ ဂရင်းကဒ်ရ ပီအေရုံးမှာ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်သွားတဲ့ တရုတ်မယန်းက ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဝယ်လိုက်တော့ သူ ၅ နှစ်နေခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းကို ဆက်ယူမလားမေးတယ်။ သွားကြည့်တော့ ကြိုက်တာနဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကို ပြောင်းလာတာ ခုဆို ၁ နှစ်ခွဲရှိပြီ။ ယန်းက မွေ့ ယာ၊ ကုလားထိုင်ဆိုဖာ၊ စာကြည့်စားပွဲ၊ စာအုပ်စင်၊ မိုက်ခရိုဝေ့စ်၊ ဘလန်ဒါ၊ slow cooker၊ အကင်စက်၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ ဖိနပ်စင်၊ ဘီဘီကျူအိုးတွေကို ၂၅၀ နဲ့ပုတ်ပြတ်ရောင်းသွားတယ်။
Thanksgiving ဈေးချတုန်း တီဗွီအကြီး၊ ပရင့်တာဝယ်။ အပင်စိုက်တာ ဝါသနာပါတော့ အပင်တွေစိုက်။ အိမ်က ၃ ထပ်အိမ် ကိုယ်ကအောက်ထပ်၊ ဒုတိယထပ်မှာ တရုတ် ၃ ယောက်၊ တတိယထပ်မှာ တရုတ် ၄ ယောက်နေတယ်။ အိမ်ဘေးမှာ နောက်ဖေးခြံကိုသွားဖို့လမ်းကြားလေးတွေရှိတယ်။ အိမ်ရှေ့ ကနေဝင်ရင် အောက်ထပ်ကို နည်းနည်းဆင်း ဘွိုင်လာအိုးတွေထားတဲ့အခန်းကို ကျော်ပြီးမှ ကိုယ့်အခန်းကိုရောက်တယ်။ အဆင်းလမ်းမှာ ပစ္စည်းတွေရှိပြီး နည်းနည်းမှောင် မွန်းကျပ်သလို ခံစားရလို့အရှေ့ တံခါးကို သုံးလေ့မရှိဘူး။ နောက်တံခါးကို သုံးလေ့ရှိတယ် ကိုယ့်အိပ်ခန်းက နောက်တံခါးနဲ့ကပ်နေတာကိုး။ အဲ့ဒီဒေသက ပေါ်တူဂီ၊ အိုင်းရစ်များပြီး ခုမက်ဆီကန်နည်းနည်း များလာတယ်။ Newark နဲ့ နီးလို့safe မဖြစ်ဘူးထင်ပေမဲ့ ရထားဘူတာကနေ မြို့ ထဲအထိ safe ဖြစ်တယ် အိမ်က safe ဖြစ်တဲ့ဇုန်ထဲပါတယ်။ တရုတ်ဆိုင်သေးသေးလေး တခုပဲရှိတော့ အစားအသောက် သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ အမေရိကန်အစားအစာတွေကို မစားနိုင်တော့ မချက်ရင် ငတ်ပြီ။ ကွင်းမှာဆို အာရှအစားအသောက် အရမ်းပေါတော့ ချက်ပြုတ်စရာ မလိုဘူး။ ဒီရောက်မှ မဖြစ်မနေချက်ပြုတ်ရတော့ ဟင်းချက်တာ နည်းနည်းတိုးတက်လာတယ် (ကိုယ့်ဘာသာထင်တာ)။ ဝေါထရိတ်စင်တာကို မိနစ် ၂၀၊ midtown ၃၄ လမ်းကို ၄၅ မိနစ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ရုံးကို မိနစ် ၅၀ အတွင်းရောက်တယ်။ ဒီတော့ သွားရေးလာရေး လွယ်ကူပေမဲ့ အစားအသောက် နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ်။ မကြီးပြန်သွားတော့ တစ်ယောက်တည်းနေရတာ ကြောက်လားလို့ဆူနမ်က မေးဖူးတယ်။ ဟင့်အင်း ... ကိုယ်က အကြောက်အလန့် နည်းတဲ့သူ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ပထမဆုံးနှင်းတွေကျတဲ့နေ့မနက် ၃ နာရီခွဲ
ဘမ်း....ဘမ်း...ဘမ်း (နောက်ဖက်တံခါးကို ခပ်ပြင်းပြင်းထုသံ)
အိပ်မောကျနေရာကနေ လန့် နိုးသွားပြီး ဘုရားရေ ... ဘာသံပါလိမ့်...ကြောင်တွေ ရန်ဖြစ်ကြတာလား...
Pleaseeee helppppp meeeee. I ammmmm soooo hungryyyyyy. Soooo colddddd.....
အသံက ရှည်ရှည်လျားလျား ဆွဲဆွဲငင်ငင် မပြီမပြင် တဆက်တည်းအသံ ကြောင်အော်သံများလား ...
နောက်ထပ် အသေအချာ နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်အသံ ဘုရားရေ ... ကျယ်လိုက်တာ ကိုယ့်ဘေးနား ကပ်အော်နေသလိုပဲ။ အိပ်ယာကနေ ဆတ်ခနဲထ ဖုန်းကိုယူ အခန်းတံခါးကို အသာလေးဖွင့် ခြေဖျားထောက်ကာ အိပ်ခန်းဘေးမှာရှိတဲ့ တံခါးနားသွားရပ်နေလိုက်တယ်။ တံခါးဖုနား အဆင်သင့်လက်ရွယ်ထားလိုက်ပြီး တံခါးအတင်းတွန်းဖွင့်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ခွန်အားနဲ့အထဲကနေ တွန်းခံထားရင် တံခါးပွင့်မှာမဟုတ်ဘူး။ ခရေဇီမိန်းမကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ ကြားမှာ တံခါးလေးပဲခြားတယ်။ အပြင်ကနေ အော်နေသံကို အတိုင်းသားကြားရတယ်။ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဆွဲဆွဲငင်ငင် ငိုကြီးချက်မနဲ့စိတ်ခြောက်ခြားစရာ။ နောက် ၃ မိနစ်လောက် ဆက်အော်နေရင်တော့ ၉၁၁ ခေါ်မယ်။ ၂ မိနစ်လောက်အကြာမှာ အော်ဟစ်မြည်တမ်းရင်း ခေါင်းရင်းဖက်ကနေ ပြန်ထွက်သွားတယ်။ မနက်မိုးလင်းတဲ့အထိ တရေးမှအိပ်လို့ မရတော့ဘူး အဲဒီတုန်းကသာ မကြောက်သာ ပြီးမှတွေးကြောက်နေတော့တာ။ ဘေးအိမ်တွေမှာလည်း နောက်ဖေးတံခါးရှိရဲ့ သားနဲ့ဘာလို့ ကိုယ့်အိမ်ကိုမှ တံခါးလာခေါက်တာလဲ မနက် ၃ နာရီခွဲအချိန်။ အဲဒီလိုတောင်းတော့ တံခါးဖွင့်ပေးမှာလား နောက်ဖက်ခြံထဲကို ဝင်လာတာကိုက ပိုင်နက်နယ်မြေ ကျူးကျော်မှုနဲ့ရဲတိုင်လို့ ရတယ်။ တရုတ်မယန်းနဲ့ဝိုင်းကို မတ်ဆေ့ပို့ တော့ သူတို့ က အယ်မလေး ကြောက်စရာကြီး။ တရုတ်မယန်းက ဒီနေရာက safe မဖြစ်တော့ဘူး သူ့ အိမ်နီးနားချင်းရဲ့ ကားတွေ အခွဲခံရတယ်။ သူ့package delivery တွေလည်း ဖောက်ထားတာတွေ့ တယ်။ ဒါတောင် သူနေတာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအသစ်။
နယူးဂျာစီအိမ် ညာဖက်ဘေးလမ်းကနေ နောက်ဖက်တံခါးဆီ သွားရတယ်၊ရှေ့ မှာ ကားဂိုဒေါင်၊
ဘွိုင်လာခန်းကို ကျော်ပြီးမှ ကိုယ့်အခန်းရောက်တယ်၊ နောက်ဖေးတံခါးကဝင်ရင် ပိုနီးတယ်။
မကြီးကို ပြောပြတော့ မိန်းမအသံနဲ့အိမ်ခြေမဲ့ယောကျာ်းဖြစ်မယ် နင် တယောက်တည်းနေတာ နောက်ဖက်တံခါးကိုသုံးတာကို သိလို့ ။ နင့်ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူ ရှိလိမ့်မယ် သတိထားနေ ဆောင်းရာသီ ညနေ ၄ နာရီခွဲဆို မှောင်နေပြီ နောက်ဖက်တံခါးကို မသုံးနဲ့ တော့ အိမ်ရှေ့ တံခါးကဝင်။ မှောင်နေတော့ နောက်ဖက်မှာ စောင့်နေရင် ဘယ်လိုမှသိမှာမဟုတ်ဘူး အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ရှိတဲ့အလေးပစ္စည်းတွေနဲ့နောက်ဖက်တံခါးကိုပိတ်ထား။ ကိုယ့်မှာကြီးကြီးမားမား ရှိတာဆိုလို့လက်ကေ့အိတ်တွေပဲရှိတယ်။ လက်ကေ့အိတ်တွေနဲ့နောက်ဖက်တံခါးကို ပိတ်လိုက်တယ်။ ချစ်အစ်မကြီးမခိုင် အကြံပေးလို့အရမ်းလေးတဲ့ ဧည့်ခန်းထိုင်ခုံနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ တရုတ်မယန်းကို အဲ့ဒီဓာတ်ပုံပို့ တော့ နင် အရမ်းကြောက်နေရင် ပြောင်းလေတဲ့။ ဆောင်းတွင်းကြီး အိမ်ပြောင်းရတာ ပင်ပန်းတယ် ခုတော့ safe ဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်ဖြစ်ရင်တော့ ပြောင်းမယ်။ အိမ်ရှင်ကို မတ်ဆေ့ပို့ တော့ နောက်နေ့ ညနေမှ ဖုန်းနဲ့ လှမ်းမေးတယ်။ လူသံဆိုတာ သေချာရဲ့ လား ငါလည်း အစက ကြောင်အော်သံလားလို့လူသံမှလူသံစစ်စစ်။ နောက်ဖက်အိမ်တွေက ပါတီလုပ်တာများလား (come on .... မနက် ၃ နာရီခွဲ နှင်းကျနေတဲ့အချိန် ဘယ်သူကပါတီလုပ်မှာလဲ) ပါတီမဟုတ်တာ သိပ်သေချာတယ်။ နောက်ဖက်တံခါးကို လုံးဝမသုံးနဲ့ရှေ့ ဖက်တံခါးကိုပဲသုံး ဘယ်သူလာလာ တံခါးလုံးဝမဖွင့်ပေးနဲ့ ။ နောက်ဖေးမီးကို တညလုံးဖွင့်ထားရင် မီတာအရမ်းတက်မယ် လူလာရင် အလိုလို မီးလင်းတဲ့ sensor မီးလုံးတပ်ဖို့လုပ်ပေးမယ်။ ဟွန်း ... ဘယ်တော့များမှ တပ်ပေးမလဲမသိ ကိုယ် အိမ်ပြောင်းတော့မှ တပ်ပေးမယ်ထင်ပါ့။
ဝိုင်းကို ပြောပြတော့ နင့်အိမ်ရှင်ကတော့ တကတည်းမှပဲ သတိဝီရိယနဲ့ နေ အိမ်ပြန်ရင် ဘယ်ကိုမှမကြည့်ဘဲ မနေနဲ့ကိုယ့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်။ ကိုယ့်နောက်က ဘယ်သူလိုက်လာတယ် ဘယ်နားမှာလူရှိတယ်ဆိုတာ သတိထား။ တခါတလေ အဲဒီမိန်းမအသံကြီးကို ကြားယောင်ပြီး လန့် နေတတ်တယ်။ ဘယ်တော့များ နောက်ဖေးတံခါးကို လာခေါက်မလဲ ညကြီးအချိန်မတော် စိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ် အသံကြီးကိုကြားရမလဲ။ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် ၁၀ ရက် တရားစခန်းက ပြန်ရောက်လို့အိမ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ခြေရာလက်ရာမပျက်။ အိမ်မှာလည်း Canon 7D ကင်မရာ၊ Macbook ကွန်ပျူတာကလွဲရင် ဘာမှတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်း မရှိပါဘူး။ အရေးကြီးတဲ့ ပတ်စပို့ ၊ SSN ကဒ်၊ ဂျီစီကဒ်၊ ဘဏ်ချက်စာအုပ်တွေကို တရားစခန်းဆီ သယ်သွားတယ်။ ည ၇ နာရီခွဲလောက် နောက်ဖေးတံခါးကို ဖွဖွလေးလာခေါက်နေသလို စိတ်ထဲထင်လို့နောက်ဖေးတံခါးကို လှည့်လှည့်ကြည့်နေတာ။ တံခါးများ တဖြည်းဖြည်းပွင့်လာပြီး ခရေဇီမိန်းမကြီးကို တွေ့ ရမလား။ နားကိုအသားကုန်စွင့်ပြီး သတိဝီရိယရှိနေတာ ဧည့်ခန်းကပြတင်းပေါက်ကို ဒေါက်... ဒေါက်လို့ခေါက်သံကြားတော့ လန့် ဖျန့် သွားတယ်။ ပိန်းပန်းပင်၊ snake plant ပန်းအိုး ၂ အိုးကြားက မျက်နှာဖြူဖြူကို မြင်လိုက်ရတော့ ဟယ် ဒီမိန်းမကြီး အတင့်ရဲလိုက်တာ ည ၇ နာရီခွဲပဲ ရှိသေးတယ်။ ကြောက်မနေနဲ့ကိုယ်ကအထဲမှာ သူဘာလုပ်လို့ ရမှာလဲ ဘယ်သူလဲဆိုတာ အသေအချာကြည့်ထားမယ် ရဲကိုပြောပြလို့ ရအောင်။ ရှေ့ ဖက်တံခါးကိုလာဖို့အမူအယာလုပ်ပြနေတော့ အိမ်ရှေ့ တံခါးဆီသွား တံခါးမဖွင့်ပေးသေးဘဲ ရပ်နေတုန်း သူကတံခါးဖွင့်ဝင်လာတယ်။ အပေါ်ထပ်က ကက်သရင်းဟူတဲ့ သြော် ကိုယ့်အိပ်ခန်းအပေါ်ထပ်မှာနေတဲ့တယောက်။
ခြေသံပြင်းလုို့အိမ်ရှင်ကိုပြောပြတော့ ကက်သရင်းဟူနေတာတဲ့ ကုိုယ်က ခြေသံပြင်းလွန်းလို့ယောက်ျားလေးထင်နေတာ။ တံခါးမကြီးကနေ အိပ်ခန်းဆီလမ်းလျှောက်လာတဲ့အသံ ကြားရပြီဆိုရင် သူ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီမှန်း ကိုယ်သိတယ်။ ပထမထပ်ကလူတွေ ဂိမ်းကစားကြလို့အင်တာနက်က မကောင်းဘူး ကိုယ့်အင်တာနက်ကို ရှယ်လို့ ရမလားတဲ့။ မနှစ်က ကက်သရင်းဟူ၊ အမ်မာတို့ဒုတိယထပ်ကို ပြောင်းလာတုန်းက ကိုယ့်အင်တာနက်ကို ရှယ်သုံးမလို့လာတောင်းဖူးတယ်။ တလ တယောက် ၁၀၊ ၄ ယောက်ဆိုတော့ ၄၀ နဲ့အင်တာနက် ရှယ်ပေးဖူးတယ်။ အင်တာနက် ၁၀နဲ့ရှယ်မယ်ဆိုလို့ဝမ်းသားအားရဖြစ်။ မေးရဦးမယ် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် ပထမဆုံးနှင်းကျတဲ့နေ့မနက် ၃ နာရီခွဲ ခရေဇီမိန်းမတယောက် ကိုယ့်နောက်ဖေးတံခါးကို လာခေါက်ပြီး အစားအစာတောင်းတယ်။ တော်တော့်ကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အသံနဲ့နင် ကြားမိသလား။ ဟယ် ... လန့် စရာကြီး ဒီဇင်ဘာတလလုံး ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာ ကျောင်းတက်နေတာ သူ့ ဖုန်းက ကယ်လီဖိုးနီးယားဖုန်း။ ငါ အရင်တုန်းက ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး မေရီလန်းမှာနေခဲ့တာ ငါ့ဖုန်းက မေရီလန်းကုတ်နံပါတ်။ သူ့ ကျောင်းက Fairfax မှာ သိတာပေါ့ ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တရုတ်မကလဲယားကွမ်းက Falls church ၊ ရာမားက Sterling ၊ Tyson နားမှာနေတာ။ ကိုယ်နေခဲ့တာ မေရီလန်း Rockville နားမှာ မေရီးလန်း၊ ဗာဂျီးနီးယား၊ ဒီစီဆိုတာ ဆက်နေတာပဲ။ သူ့ အခန်းဖော်ကို ဒုတိယထပ်ကောင်လေးက ညဥ့်နက်သန်းခေါင် မိန်းမတယောက်အော်သံကြားတယ် အဲဒီမိန်းမက ခရေဇီ ၂ အိမ်၊ ၃ အိမ်ကျော်ကတဲ့။ ငါ့မှာ အထိတ်တလန့် ဖြစ်လို့နောက်ဖေးတံခါးကို ဆိုဖာကုလားထိုင်နဲ့ပိတ်ထားတယ် ဒီမှာကြည့်။
ဒီလို ပိတ်ထားတယ် ဝင်လာရင် ဖုန်သုတ်တံတုတ်နဲ့ရိုက်မလို့ 
ပြတင်းပေါက်တံခါးခေါက်သံနဲ့ အတူ နင့်မျက်နှာကြီး ဘွားကနဲပေါ်လာတော့ ငါ့မှာလန့် လိုက်တာ ခရေဇီမိန်းမကြီး လာပြန်ပြီလားလို့ ။ နင် သိပ်မကြောက်နဲ့ နော် ငါတို့ တွေရှိတယ် တခုခုဆို ဖုန်းဆက်လိုက် ငါတို့ အားလုံးအတူတူသွားပြီး ရဲတိုင်ကြမယ်။ (ဟမ် .... ဘယ်နှယ့်အတူတူသွားပြီး ရဲတိုင်ရမှာလဲ ရဲတိုင်ချင်မှတော့ ၉၁၁၊ မြို့ရဲကို ဖုန်းဆက်လိုက်ရင် ၅ မိနစ်အတွင်းရောက်လာမှာကို) ခုလိုအားပေးစကားပြောတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ မကြောက်တော့ဘူး တခုခုဆို အပေါ်ထပ်ကို ပြေးလာခဲ့မယ်။ တရားစခန်းမှာသိတဲ့ ဒေါက်တာအစ်မက သတင်းပေးလို့ကွင်းဖက်မှာ လုံးခြင်းအိမ်အောက်ဖက် ကားဂိုဒေါင်ကုို ပြင်ထားတဲ့ studio အခန်းကို သွားကြည့်တယ်။ အခန်းက ကျဉ်းကျဉ်းလေး အိပ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ bath tub မဟုတ် ရေပန်းနဲ့ ချိုးတဲ့ဟာ ၄၀၀ - ၄၅၀ square foot လောက်ပဲကျယ်တယ်။ အပေါ်ထပ်မှာ ဘယ်သူမှမနေဘူး ဘူတာရုံနဲ့၁၅ မိနစ် ကိုယ်အရင်နေခဲ့ဖူးတဲ့နေရာနားမှာ အစားအသောက်ပေါတယ်။ မကြီးသူငယ်ချင်းအစ်မတွေနဲ့နီးတယ်။ ရုံးကို ရထား ၁ နာရီ လမ်းလျှောက်တာ နာရီဝက် ၁ နာရီခွဲ အချိန်ပေးရတယ်။ commute time ၁ နာရီ၊ ၁ နာရီခွဲဆိုတာ ကြာတယ်လို့ မဆိုနိုင်ဘူး။ ဈေးလည်းသက်သာတယ် တယောက်တည်း သူများနဲ့ ရှယ်နေစရာမလို။ အမေက ကျဉ်းလည်းကိစ္စမရှိဘူး အဲ့ဒီနေရာက safe ဖြစ်တယ် နေထိုင်မကောင်းရင် အသိအစ်မတွေနဲ့၁၀ မိနစ်ပဲဝေးတော့ လာကြည့်ပေးနိုင်တယ်။ သူများတွေနဲ့ရှယ်နေတုန်းကလည်း ကိုယ့်အိပ်ခန်းထဲမှာပဲ နေတာပါပဲ ဧည့်ခန်းမှာတောင် မထိုင်ဖြစ်ဘူး တခါတလေမှ။ ဝိုင်းကိုပြောပြတော့ နင် mediumlism ကနေ minimalism ဖြစ်ရတော့မယ် ကောင်းတယ်ဟေ့။
ဝိုင်းက မန်ဟက်တန် တယောက်အိပ်ခန်းရဲ့ ဧည့်ခန်းမှာ အခန်းဖွဲ့ နေတဲ့သူ တလ ၁၂၀၀ ပေးရတယ်။ သူ့ ရုံးနဲ့လမ်းလျှောက်ရင် ၁၀ မိနစ်၊ gym ၊ broadway ပြဇာတ်တွေနဲ့နီးနီးနားနား နေချင်သူ၊ သွားရေးလာရေးအတွက် အချိန်ကုန်မခံချင်သူ၊ အိမ်မှာမနေဘဲ ခရီးအမြဲထွက်ရသူ၊ အိမ်မှာနေလည်း အိမ်မကပ်သူ။ ကိုယ်က မီးဖိုချောင်ကျယ်ကျယ်၊ စာကြည့်ခန်း၊ ဝရန်တာ၊ စိုက်ပျိုးဖို့ မြေလေးပါတဲ့အိမ်၊ ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ရပ်ကွက်၊ ပန်းခြံ၊ trail လမ်းတွေ လမ်းလျှောက်ထွက်ချင်သူ။ ဗာဂျီနီးယားမှာ ရာမားရဲ့town house အိမ်လေးက သိပ်လှတာပဲ။ New Year Sale တွေနဲ့ဝယ်ချင်နေတာတွေကို ဘရိတ်အုပ်ထားရတယ် ထားစရာနေရာမရှိတော့မှာမို့ လို့ ။ စတိတ်ရောက်ကတည်းက ပြောင်းလိုက်ရတဲ့ပြည်နယ်၊ ပြောင်းလိုက်ရတဲ့အိမ်ဆိုတာ ခုတော့ ဘယ်ကိုပြောင်းရမလဲ လာထားပဲ။ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ minimalism ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရဦးမယ်။ ထူးဆန်းသော တံခါးခေါက်သံကြောင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလကုန်မှာ ကွင်းဖက်ကို ပြောင်းရပြန်ဦးမယ်။
ဇန်နဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၈။
ကြောက်စရာကြီးနော်...တစ်ယောက်တည်းနေရတာ ကောင်းလည်းကောင်းမယ် မကောင်းလည်းမကောင်းဘူး....။ ညီမတော့ ရှဲနေရတာ သိပ်စိတ်ကုန်နေပြီ ။ တစ်အိမ်လုံးငှားပြီး တစ်ယောက်တည်းနေချင်တယ်..။ ဒီမှာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ ။ အိမ်သစ်မှာအစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေ အမရယ်..။ဘယ်လောက်ဝေးဝေး သတိလေးထားပြီးရှေ့ပေါက်က၀င်နော်..။
တစ်ယောက်တည်းနေရတာ နေမကောင်းဖြစ်ရင်၊ ခရေဇီလူတွေ နှောင့်ယှက်ရင် ဒုက္ခရောက်ပြန်တယ်။ အများနဲ့ ရှယ်နေရတာ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ၊ အိပ်ဖို့ ခက်တာ ဒုက္ခရောက်ပြန်တယ်။ ခုတော့ ရှေ့ ပေါက်ကဝင်တယ် သတိထားနေရတယ်။
ကုိုယ် ကယ်လီဖုိုးနီးယားမှာနေတုန်းက တကယ့်ရပ်ကွက်အသန့် မှာနေတာ
အိမ်ရှင်အမေရိကန်တွေက သူငယ်ချင်းလည်းဟုတ် ကျေးဇူးရှင်လည်းဟုတ် အလုပ်လည်းအတူလုပ်ဖူးသူဟုတ်မို့ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ပေးနေထားတာ။ အဲလိုသဘောမျိုးလေးပဲ။ နောက်ဖက်မှာပန်းခြံလေးနဲ့ ။အကျဉ်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။
တရုပ်တွေဆုိုတော့ အိမ်မှာပိုက်ဆံထားတယ်ထင်ပြီး လာတုိုက်တာတဲ့။
လျှပ်စစ်ပြင်ဖုို့ ဆုိုလား စစ်ဖုို့ ဆုိုလားအဲလိုမျိုးပြောပြီး တံခါးခေါက်ဝင်တာ။